Sababta wiil Soomaali ah loogu diiday guushii uu gaaray | KEYDMEDIA ONLINE
Sababta wiil Soomaali ah loogu diiday guushii uu gaaray
Wiil Soomaali ah oo ku guuleystay tartanka orodka kalabarka ayaa loo diiday guusha maadaama looga baahnaa oo keliya in uu ordo masaafe dhan 10k.
BRISTOL, UK- Tartanka “Bristol half marathon” oo la ordo 22km, ayaa dhacay waqti uu socday tartanka kale ee “Bristol 10k” oo qeyb ka ahaa munaasabadda orordka Great Bristol, kuwaas oo la qabtay Axaddii aynu soo dhaafnay.
Markii hore Cumar Axmed oo reer Birmingham,ayaa iska diiwaan geliyay orodka 10k, hayeeshee waxa uu si khaldan uga qayb galay, kuna guuleystay tartanka orodka kalabarka ah, kaas oo uu ku dhammeystiray 63 daqiiqo oo keliya.
Cumar oo asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya, ayaa bar khaldan ka baxay, markii uu gaaray goobta ay ku kala baxaan labada masaafe, taasoo keentay inuu hareer maro halkii uu ku wajahnaa.
Guddoonka tartanka ayaa go’aanka ay soo saareen, ayay ku sheegeen in qofka tartanka sida saxda ah ugu guuleystay uu ku dhammeystiray 67 daqiiqo. Cumar na uu meesha u yimid ka qayb galka tartanka 10k, loogana baahneyn tartanka sida hordhaca aheyd loogu sheegay in uu isagu ku guuleystay.
“Bandhig cajiib ah ayuu sameeyay Cumar,balse waxay cabasho inooga timid tartameyaashii kale, kaddibna waxaan sameynay baaritaan ay natiijadan ka dhalatay.” Paul Foster, oo ah madaxa shirkadda tartanka qabaneysay, ayaa sidaasi yiri.
“Sharciyadu mar walba waa meeshooda, isma baddalaan, waxaan ku khasban nahay in Cumar loo diido guusha, balse waxaan ku martigelin doonaa inuu ka qayb galo tartanka Bristol ee dhici doona 2022-ka.” Paul Foster ayaa intaas ku daray hadalkiisa.
Tartanka Bristol ee 10k ayaa la qabtaa xilliga guga, halka midka kala barkana la qabto dabayaaqada xagaaga, hayeshee labada tartan ayaa sannadkii horay u baaqday sababo la xariira safmareenka Covid-19.